Nepal Dayari | आफै ह,त्या गरेर अन्तर्वार्ता दिदै हिड्ने लोकबहादुर कस्तो अप,राधि ? कसलाई लगाएका थिए दो,ष के बोलेका थिए… (हेर्नुस भिडियो)
भाद्र २८, २०७८ सोमबार १३३७ पटक हेरिएको
काठमान्डौ- मादी–१ उमलिङको खोला गाउँमा एकै परिवारका ६ जनाको ह’ ‘त्या भएपछि २५ वर्षीय लोकबहादुर कार्की अ,नुसन्धान टोलीलाई खाना पकाउन सघाइरहेका थिए। उनले उक्त घ,टना आफूले पहिले देखेको भन्दै त्यसको प्रकृतिबारे सुनाइरहेका थिए।
उनले बडाबाबु (तेजबहादुर कार्की)सहित ६ आफन्त गु,माउनुपरेकोमा बि,लौना गर्ने गरेका थिए। तेजबहादुरको कोहीसँग रिसइबी नभएको, मिलनसार भएको बताउने गरेका थिए। सामाजिक काममा अग्रसर भएर काम गर्ने व्यक्ति रहेको उनको भनाइ थियो।
तर, उनका भाइ घ,टनाका बेला लगाएको सर्ट लगाएर बाहिर निस्किएपछि अ,नुसन्धान उनको परिवारमै केन्द्रित भयो। उक्त कपडा धोए पनि र,गतको टाटा देखिएपछि गो’प्य रूपमा अ,नुसन्धान गर्दा सफलता मिलेको स्रोत बताउँछ। उक्त कपडासहित घ,टनामा प्रयोग गरेका सामान प्रहरीले ब’रा’मद गरेको छ। संखुवासभाका डीएसपी लालध्वज सुवेदीले भने थप अ,नुसन्धान भइरहेकाले आज (आइतबार) इलाका प्रहरी कार्यालय चैनपुरमा पत्रकार सम्मेलन गरी घ,टना विवरण सार्वजनिक गरिने जानकारी दिएका छन्। लोकबहादुरले बौदमान कार्कीको परिवारका चार पुस्ताको ह’ ‘त्यामा आफ्नो सं’लग्नता स्वीकार गरेको अ,नुसन्धानमा सं’लग्न अधिकारीले बताएका छन्। उनी बौदमानका जेठो दाजुका नाति हुन्। उनको घर घ,टनास्थलबाट करिब डेढ–दुई सय मिटर दूरीमा छ।
तेजबहादुर सोमबार बिहान खेताला खोज्न निस्किएका बेला बाटो ढुकेर आ’क्र’मण गरी ह’ ‘त्या गरेको स्वीकार गरेको अ,नुसन्धानमा सं’लग्न अधिकारीको दाबी छ। तेजबहादुरले हे,पेर बोली व्य,वहार गर्ने गरेकाले उनको ज्या’न लि’एको बताएको जनाइएको छ।
छोराले तेजबहादुर सडकको भित्तामा मृ,त अवस्थामा देखेको रणबहादुरले प्रहरीसँग बताएका थिए। त्यसपछि लोकबहादुरले नै बडीआमा कमला र भाउजू रञ्जनाको श,व देखेको बताएको जनाइएको छ। उनीहरू बाबुछोराले नै तेजबहादुर, कमला र रञ्जना मृ,त भेटिएको खबर गाउँलेलाई गरेका थिए। अरूको श,व देख्नुभन्दा पहिले छिमेकीले पार्वतालार्ई मु,च्र्छा परेको होला भनेर घरमा लगेर राखेको जनाइएको छ। उनमा बेला–बेला बे’होस भइरहने स,मस्या थियो। प्रहरी पुग्दा उनको श,व ओछ्यानमै थियो। उनका पति बौदमानले घ,टनाबारे चाल नपाएको बताए।
बौदमान कान कम सुन्ने, आँखा मधुरो देख्ने जनाइएको छ। तेजबहादुरको शव सडकछेउ घो’प्टो परेको, कमला र रञ्जना घरनजिक खोल्सीमा अनि दीपेन र गोमा घरमाथि खरबारीमा मृ,त भेटिएका थिए । प्रदेश १ का प्रहरी प्रमुख डीआईजी अरुणकुमार बीसी, संघीय प्रहरी इकाइ धरानका एसपी भीम दाहाल, केन्द्रीय अ,नुसन्धान ब्युरोबाट डीएसपी रुगम कुँवर र संखुवासभाका डीएसपी लालध्वज सुवेदीसहितका अधिकारी अ,नुसन्धानमा खटिएका थिए।
यत्रो न,रसंहार एक्लै ?
एकै परिवारका ६ जनाको ह’ ‘त्या सोमबार बिहान एकै समयमा भयो। उक्त घ,टनामा सं’लग्न भएको आ,रोपमा प्रहरीले शुक्रबार आफन्त लोकबहादुलाई प,क्राउ गरेको छ। तर, एक जनाबाट बिहान यस्तो घ,टना कसरी सम्भव भयो भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। घ,टनामा कुनै धा’रि’लो ह’ति’या’र प्रयोगसमेत भएको छैन। मृ,तकको टाउकोमा सामान्य चो’ट देखिन्छ। ६ जनाको श,व चार स्थानमा करिब सय मिटर आसपास भेटिएको थियो।
घ,टना बिहान भए पनि कसैले देखेको र कराएको आवाजसमेत नसुनेको बयान स्थानीयले दिएका थिए। छरछिमेक पनि काममा निस्किने समयमा एक्लै लोकबहादुरले कसरी गरे ६ जनाको ह’ ‘त्या ? एक्लै छोटो समयमा यस्तो घ,टना गर्न नसक्ने अ,नुसन्धानले देखाउँछ। अन्य व्यक्ति पनि सं’लग्न भएको आ’शंकामा अ,नुसन्धानलाई जारी राखिने प्रहरीले जनाएको छ।
लोकबहादुर दुईपटक वैदेशिक रोजगारीमा गएका थिए। फर्किएर खेती किसानीमा लागे। कक्षा ८ सम्म पढेका उनी ६ वर्षअघि मलेसिया गए। त्यहाँबाट १० महिनामा घर फर्केर डेढ वर्षपछि कतारतिर उडे। त्यहाँबाट पनि नौ महिना नपुग्दै फर्किए। आमाको गत चैत २६ गते निधन भएपछि बुवा र भाइसहित तीन जना बस्दै आएका थिए। यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा छ ।